Firefox 85 inosvika ichipatsanura network uye ichipfura Flash Player | Linux Vakapindwa muropa
Mavhiki mana apfuura, Mozilla yakaburitsa iyo v84 kubva ku browser rako Webhu. Yakanga iri vhezheni yandisingazive kuti nditi yakakosha here kana kuti inonakidza chete, sezvo yakatanga kuita WebRender paLinux uye yaive yekupedzisira kutsigira Flash Player. Nguva pfupi yapfuura, kuvhurwa kwe Firefox 85, uye uku kwakakosha kuendesa, zvirinani kune avo vedu vane hanya nezve zvakavanzika uye vasingade tekinoroji hombe kuunganidza ruzivo rwakawanda nezvedu.
Nhasi a nyowani yekurwisa-yekutevera basa, zvichiita kuti zvinyanye kuomera mapeji ewebhu kutaurirana. Kana zviri zveFirefox 85, uye seizvo Chrome yatove kuita (uyo wandinovimba zvishoma ...), iro bhurawuza richaparadzanisa zvido, pakati pezvimwe zvinhu, newebhu peji, pane kuzviita nenzira yakajairika. Izvo zvichasara pane yega yega webhusaiti pasina mukana wekutaurirana nevamwe maHTTP macache, mifananidzo, favicon, peji maitiro, CA Intermedia zvinyorwa, CORS-preflight uye rumwe ruzivo rwakadai semadziva ekubatanidza, DNS, kusimbiswa kweHTTP, Alt-Svc, fungidziro kubatana, HSTS, OCSP, zvitupa zveTLS, zvitambi zveTLS chikamu, pre-kubatana uye preloads.
KuMozilla, tinotenda kuti une kodzero yekuvanzika. Hazvifanirwe kuteverwa online. Kunyangwe iwe uri kutarisa yako bank bhalansi, kutsvaga chiremba akanakisa, kana kutenga shangu, makambani ekunyengera asina hunhu haafanire kukwanisa kukutevera iwe paunenge uchitsvaga pawebhu. Nechikonzero ichocho, isu tinoramba tichishanda kusimbisa Firefox pakurwisa online kwevashandisi vedu.
Pfungwa dzeFirefox 85
Firefox ikozvino inokudzivirira kubva kuma supercookies, mhando ye tracker iyo inogona kuramba yakavanda mubrowser yako nekukutevera online, kunyangwe mushure mekubvisa makuki. Nekuzviparadzanisa supercookies, Firefox inodzivirira kubva pakutsvaga iwe webhu kubhurawuza kubva kune imwe saiti kuenda kune imwe.
Zviri nyore kupfuura nakare kose kuchengetedza uye kuwana mabhukumaki ako. Firefox ikozvino inorangarira nzvimbo yako yaunofarira yemabhukumaki akachengetedzwa, inoratidza mabhukumaki ekushandisa nekumisikidza pamatebhu nyowani, uye inokupa iwe nyore kuwana kune ako ese mabhukumaki kuburikidza nebarbar reruzha.
Password maneja ikozvino inokutendera kuti ubvise ako ese akachengetedzwa marogi nekamwe chete, pachinzvimbo chekudzima yega yega login yega.
Yakabviswa Flash Player.
Kugadziridza kwakasiyana siyana.
Firefox 85 ikozvino iripo kune ese masisitimu akatsigirwa kubva kuMozilla kurodha peji, iyo yatinokwanisa kuwana kubva Iyi link. Vashandisi vane bhurawuza rakaiswa kubva kumahofisi epamutemo, isu tichaona iyo yekuvandudza mumaawa mashoma anotevera Flatpak uye Snap pack iripowo, kunyange Canonical inotora nguva yakati rebei kugadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Firefox 85 inosvika ichipatsanura network, ichipfura Flash Player uye idzi dzimwe nhau
Chinzvimbo chaDoctorow ndechekuti iwe unofanirwa kugadzirisa iyo Internet uye kwete mapuratifomu